All Ebooks :: Malagasy :: Inona no dikan’ ny hoe tonga Mpiandry Ondry (E BOOK)
HomeAll EbooksMalagasyInona no dikan’ ny hoe tonga Mpiandry Ondry (E BOOK)
Inona no dikan’ ny hoe tonga Mpiandry Ondry (E BOOK)
Zavatra iray ihany no tonga ao an-tsainao rehefa maheno ny teny hoe “Mpiandry ondry” ianao – ondry! Ny ondry dia zava-manan’aina tsy mahaleo tena mila mpiandry. Ny mpiandry dia mpitari-dàlana mikarakara sy mitia ny ondry. Ao anaty baiboly Andriamanitra dia mahita antsika toy ny ondry eny amin’...
Zavatra iray ihany no tonga ao an-tsainao rehefa maheno ny teny hoe “Mpiandry ondry” ianao – ondry! Ny ondry dia zava-manan’aina tsy mahaleo tena mila mpiandry. Ny mpiandry dia mpitari-dàlana mikarakara sy mitia ny ondry. Ao anaty baiboly Andriamanitra dia mahita antsika toy ny ondry eny amin’ ny ahitr’ Andriamanitra.
Niteny an’I Petera ihany koa Jesosy hamahana ny ondriny mba ho porofon’ ny fitiavany ny Mpamonjiny. Ny maha mpiandry dia asa tena lehibe.Tena voninahitra lehibe ny voaantson’ Andriamanitra hiditra ao amin’ ny asany sy ny fikarakarana ny ondriny.
Manasa antsika, manentana antsika ary maneho antsika ny fomba mety hidirantsika amin’ ny asa lehibe dia ny fiambenana ny olon’ Andriamanitra. Aoka ianao tsy ho tara amin’ io asa mahafinaritra amin’ ny fahatongavana mpiandry io!